Qaabkee ku dhamaan kartaa natiijada doorashada Sweden? Yaase noqonaya raysal wasaaraha cusub? | Somaliska
Qaabkee ku dhamaan kartaa natiijada doorashada Sweden? Yaase noqonaya raysal wasaaraha cusub?
Iyadoo maanta la soo afjarayo codeynta dooarashada baarlamaanka, gobolada iyo degmooyinka Sweden ayaa wali waxaa garabka isku haya xulufada kala duwan ee doonaysa in ay hogaamiyaan wadanka. Waxaa muuqata in labada xulufo ee kala ah Rödgröna iyo Alliansen aysan midkoodna heli doonin aqlabiyad ku filan, hadaba qaabkee lagu dhisi doonaa dowlad cusub? Hadaba halkaan waxaan ku eegeynaa 5 wado oo dowlad cusub lagu dhisi karo
1. Xisbiga Socialdemokraterna (S) ayaa dowlad wada jir ah la dhisi kara xisbiga Miljöpartiet (MP) haddii raysal wasaare Reinfeldt uu iscasilo oo iyagana ay helaan cododka ugu badan. Ka dib ayay taageero ka raadsan karaan xisbiga Vänsterpartiet (V) iyaga oo aan si toos ah ugu darin dowlada. Stefan Löfven ayaa u muuqda mid aan doonayn in uu xulufo la noqdo Vänsterpartiet in dani ku qasabto mooyee.
2. Haddii xisbiga dumarka ee Feminist Initiativ (FI) ay baarlamaanka soo galaan, ayaa Socialdemokraterna, Miljöpartiet iyo Vänsterpartiet (V) waxay si wada jir ah u heli karaan aqlabiyad ay wadanka ku maamulaan balse waxaa jira farqiyo waaweyn oo dhinaca siyaasada ah oo u dhexeeya xisbiyadaan iyo waxyaabaha ay doonayaan in ay isbedalka ku sameeyaan.
3. Xulufada Alliansen ayaa hogaanka sii hayn karta, haddii ay helaan cododka inta badan balse markii ay u baahdaan in ay fuliyaan sharciyo cusub ayay taageero ka raadsan karaan xisbiga cunsuriga ah ee SD iyaga oo aan si rasmi ah ugu darin xulufadooda. Midaan ayaan wax badan ka duwanayan qaabkii uu Fredrik Reinfeldt uu wadanka ku maamuli jiray afartii sano ee la soo dhaafay, isagoo mararka qaar codod ka helay SD mararka qaarna heshiis la galay Miljöpartiet.
4. Socialdemokraterna ayaa xulufo la noqon kara xisbiyada yaryar ee ku jira Alliansen haddii ay heshiis la gaari waayaan Miljöpartiet iyo Vänsterpartiet. Stefan Löfven ayaa wadahadal la samayn xisbiga Centerpartiet (C) ama Folkpartiet (FP).
5. Socialdemokraterna iyo Moderaterna (M) ayaa dowlad si wada jir ah u dhisi kara, balse taasi ayaa ah mid aad u fog maadaama labada xisbi ay fikrad ahaan aad u kala duwanyihiin isla markaana ay ku tartamayaan in ay noqdaan hogaanka wadanka. Laakiin haddii wadanka uu galo xaalad adag ayay macquul tahay in ay wada shaqeeyaan.
Yaa allah SD hogan haanoo gu dhibin
September 15, 2014 at 00:13
Ilaah nooguma dhiibo cunsuri